वामदेवको निवासमा एमाले स्थायी सतिति बैठक
काठमाडौं ७, पुस । नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीको बैठक पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको निवास भैंसेपाटीमा सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनपछिको पहिलो बैठकमा राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा तथा पार्टीको भावी रणनीति तयगर्ने एजेण्डा रहेको एक एमाले नेताले बताए । शुक्रवार दिउँसो १ बजे स्थायी समितिको बैठक राखिएको एमाले
कांग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेल र बिमलेन्द्र निधी राष्ट्रियसभामा !
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसबाट राष्ट्रिय सभामा सांसदका रुपमा कांग्रेस बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र बिमलेन्द्र निधीको नाम चर्चामा आएको छ । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्बन्धित अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यलयमा रोकिएर बसेको छ। नेकपा एमाले र माोवादी केन्द्रको बिरोधका कारण
नेतृत्वले पत्याए ३ नं को मुख्यमन्त्रीः स्थापित
काठमाडौं ६ ,पुस । काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्व मेयर तथा काठमाडौं ६ बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित सांसद केशव स्थापितले ३ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दाबी रहेको बताएका छन् । पार्टीका अध्यक्ष लगायत वरिष्ठ नेताहरुसँग परामर्श गरेर आफू यो निर्णयमा पुगेको उनको दाबी छ । पत्रकारसँगको भेटमा उनले नेतृत्वले
काठमाडौं ३, पुस । प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ नेकपा एमाले पाँच र नेपाली कांग्रेस २ प्रदेशमा पहिलो दल भएको छ । एमालेले प्रत्यक्ष र समानुपातिकको प्रारम्भिक मत विभाजनको आँकलन अनुसार प्रदेश १ र ३ मा एकल सरकारका लागि बहुमत हासिल गरेको छ । प्रदेश ६ मा एमालेबिना सरकार गठनको अवस्था छैन । भने, अन्य
तनहुँ, पुस २ । नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्न नमिल्ने बताउनुभएको छ । गृहजिल्ला तनहुँ आइपुग्नुभएका वरिष्ठ नेता पौडेलले मतदातालाई धन्यवाद दिने क्रममा भन्नुभयो,“दुई महिनाअघि सरकारले पठाएको राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश
समानुपातिकको मत गणना सकियो, एमाले पहिलो
काठमाडौं २, पुस । समानुपातिक तर्फपनि ३१ लाख ७३ हजार ४९४ मत ल्याए। पहिलो दल बनेको छ । आइतबार सम्पन्न मत गणनामा ९५ लाख ४४ हजार ७४१ मत सदर भएको आयोगले बताएको छ । दोस्रो दल कांग्रेसले ३१ लाख २८ हजार ३८९ मत पाएको छ । एमालेले कांग्रेस भन्दा ४५ हजार १०५ मत बढी पाएको छ । माओवादीले १३ लाख ३ हजार ७२१ मत पाएको छ । राजपाले
काठमाडौं २ पुस । प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न निर्वाचनको समानुपातिकतर्फको अन्तिम परिणाम घोषणामा ढिलाइ भएको छ । आयोगको लक्ष्य अनुसार गणनाले गति लिन नसकेपछि परिणाम घोषणामा केही बिलम्ब भएको हो । समानुपातिकतर्फ अब सर्लाहीको १ क्षेत्रको मात्रै गणना बाँकी छ । आयोगका अनुसार, चिसोका
समानुपातिकमा ८३ हजार मतले एमाले अगाडि
काठमाडौँ, २९, मंसिर । पहिलो र दोस्रो चरणमा मंसिर १० र २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको हालसम्मको मतगणनामा ८३ हजार मतको अन्तरले नेकपा (एमाले)को अग्रता कायमै रहेको छ । निर्वाचन आयोगको सूचना प्रणाली व्यवस्थापन शाखाबाट आज बिहान ६ बजे प्राप्त जानकारीअनुसार, नेकपा
समानुपातिकमा एमालेलाई पछ्याउँदै कांग्रेस
काठमाडौं २८, मंसिर । नेकपा एमालेले समानुपातिकतर्फ २७ लाख १७ हजार १९८ मत प्राप्त गरेको छ । पछिल्लो मतपरिणामअनुसार एमालेलाई कांग्रेसले पछ्याइरहेको छ । कांग्रेसको २६ लाख ३१ हजार ७२४ मत रहेको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार बिहीबार दिउँसो २ बजेसम्म ७९ लाख ८७ हजार ३४१ मतगणना भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रको १०
एमालेले जितेको सीट ०१ माधवकुमार नेपाल, काठमाण्डौ -२ ०२. कृष्णरबहादुर राई, काठमाण्डौ -३ ०३. ईश्वर पोखरेल ईश्वर, काठमाण्डौ -५ ०४. रामवीर मानन्धर, काठमाण्डौ -७ ०५.जीवनराम श्रेष्ठो, काठमाण्डौ - ८ ०६.कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, काठमाण्डौ -९ ०७. महेश बस्नेत, भक्तपुर -२ ०८. नवराज सिलवाल, ललितपुर - १ ०९. कृष्ण
काठमाडौ २७, मंसिर । नारायणी लामिछाने/मिलन विक्रम सिंह बस्नेत । निर्वाचनमा होमिएका राजनीतिक पार्टीका उम्मेदवार प्रायः सबैको एउटै रणनीति हुन्छ जसरी पनि आफूले चुनाव जित्ने । चुनाव जित्नका लागि उनीहरुले अनेक किसिमका हत्थकण्ठा समेत अपनाउँछन् । उम्मेदवारको कटाक्ष र सम्बन्ध पानी वारावारकै हुन्छ । चुनाव जित्दा
नुवाकोटमा समानुपातिकमा कांग्रेस अगाडी
२७ मंसिर काठमाडौ – नुवाकोटको क्षेत्र नं १ मा प्रतिनिधीसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको समानुपातिक तर्फ नेपाली कांग्रेस अगाडी भएको छ । बुधबार बिहान सम्पन्न मतगणना अनुसार नुवाकोट १ मा नेपाली कांग्रेस पहिलो, नेकपा एमाले दोस्रो र नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो भएको छ । प्रत्यक्षतर्फको छ ओटै सिट गुमाएको कांग्रेसले
२७ मंसिर काठमाडौ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ६७ जना नयाँ अनुहार विजयी भएका छन् । मंगलबार रातिसम्म १६४ निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा आइसकेको छ । अब सुनसरी ३ मा मात्र मत गन्न बाँकी छ । सो क्षेत्रबाट कांग्रेसका विजयकुमार गच्छदार र एमालेकी भगवती चौधरीबीच कडा प्रतिस्पर्धा छ । दुवैजना पूर्वसांसद हुन् । एमालेबाट नयाँ
यी नेताहरु जसलाई जन्मभुमीले नै रोज्यो
२६ मंसिर, काठमाडौ यी नेताहरु जसले जन्मभुमी भन्दा बहिर रहेर जिते पनि यसपटक जन्मभुमीले कहिल्यै नर्बिसिने गुन लगाएको छ । महन्थ ठाकुरः अध्यक्ष राजपा नेपाल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष र पटक पटक मन्त्री बनेका महन्थ ठाकुरले २०४८,२०५१ र २०५६ का तीन चुनाव लगातार सर्लाहीबाट जितेका थिए । तर कांग्रेस
यी हुन् चुनाव हार्ने डेढ दर्जन मन्त्री
काठमाडौं २५,मंसिर, नारायणी लामिछाने/मिलन बिक्रम सिंह बस्नेत । प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा मन्त्रीपरिषद्का १८ जना मन्त्रीले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा हार व्यहोरेका छन् । मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र राप्रपाबाट मन्त्री बनेका चर्चित अनुहारले चुनाव हारेका
९ लाख मत गणना गर्दा एमाले भन्दा कांग्रेसको मत ३ हजार कम
काठमाडौं २५,मंसिर । प्रतिनिधि सभाका लागि समानुपातिकतर्फ अहिलेसम्म ९ लाख ६९ हजार ८ सय १६ मत गणना हुँदा नेकपा एमालेले अग्रता लिएको छ। प्रत्यक्षतर्फ निकै पछाडि परेको नेपाली कांग्रेसले एमालेलाई पछ्याइरहेको छ। निर्वाचन आयोगले दिएको जानकारीअनुसार हालसम्म एमालेले ३ लाख ४२ लाख ९६७ मत ल्याएको
चितवन ३ मा प्रचण्ड ९ हजार बढी मतले विजयी
निकै चासो र चर्चाको क्षेत्र बनेको चितवन ३ मा वाम गठबन्धनका उम्मेद्वार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विजयी भएका छन् । मत परिणाम अनुसार प्रचण्डले ४८ हजार २७६ मत प्राप्त गर्दा पाण्डेले ३८ हजार ९३५ मत ल्याएका छन् । प्रचण्डको पाण्डे सँगको मतान्तर ९ हजार ३४१ रहेको थियो
प्रतिनिधि सभामा १२ र प्रदेश सभामा २४ स्थानको नतिजा आउन बाँकी,वाम गठवन्धन २ तिहाइ निकट
काठमाडौं २५, मंसिर । प्रतिनिधसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मत परिणाम अब अन्तिम तिर पुगेको छ । १६५ स्थान मध्ये मध्यान्ह १२ बजेसम्म १५३ स्थानको नतिजा आइसकेको छ । अहिलेसम्म एमालेले प्रतिनिधितर्फ ७६ स्थान विजयी भएको छ भने प्रदेशसभातर्फ १३७ स्थानमा विजय हासिल गरेको छ । त्यसैगरी माओवादीले प्रतिनिधि
सोमबार, २५ मंसिर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा प्रत्यक्षतर्फको मतगणना सकिएका क्षेत्रहरुमा निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको मतगणनासमेत तिव्र रुपमा अघि बढाएको छ । आयोगको पछिल्लो मतपरिणाम अनुसारसमानुपातिकतर्फ पनि नेकपा एमालेले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको छ । एमालेले ३,१५,५९५ मत प्राप्त गरेको छ भने
एनपीलाई हराए नरबहादुरले
कञ्चनपुर २५, मंसिर । कञ्चनपुर क्षेत्रनम्बर २ मा कांग्रेस नेता एनपी साउदलाई पराजित गर्दै वाम गठवन्धनका युवा नेता नरबहादुर धामीले ८ हजार भन्दा बढी मतान्तरले विजयी भएका छन् । आइतवार राति सम्पन्न मतगणना अनुसार धामी ३३ हजार ३२० मत प्राप्त गरी बिजयी भएका हुन् । निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री
विजयकुमार गच्छेदारको २५ वर्ष को बिरासत तोडिन भगवती चौधरी ले !
नेकपा एमालेका कमरेड भगवती चौधरी 2378 मतले बिजयी हुनुभएको छ। विजयकुमार गच्छदारले १२२९९ भोट प्राप्त गरेका छन् भने भगवती चौधरीले १४६७७ महतले बिजय हुनुभएको छ।
यी हुन् चुनाव हार्ने १२ हेभिवेट : बामदेव गौतमदेखि आरजु राणासम्म
काठमाडौं– दुई चरणमा भएको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतगणना जारी रहेको छ । मतगणना चल्दै गर्दा विभिन्न दलका हेभिवेट उम्मेदवारहरु पराजित बन्न पुगेका छन् । आज प्राप्त अन्तिम नतिजाअनुसार नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता, पूर्व गृहमन्त्री तथा बाम गठबन्धनका सूत्राधार बामदेव गौतम समेत बर्दिया
वरिष्ठ नेता पौडेललाई फापेन छैटौं पटक
काठमाडौ २४, मसिर, तनहँु क्षेत्र नं १ मा कागेंस वरिष्ठ नेता रामचन्द« पौडयाल पराजित हुनुभएको छ । एमालेका कृष्ण कुमार श्रेष्ठले ३४ हजार ४९२ मत ल्याउदा पौडेलले २७ हजार ६९० ल्याएका हुन् । पौडेलले यस पटक समेत गरी ६ पटक सो क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएकामा सो क्षेत्रमा ५ पटक भने जित हात पारेका थिए ।
ठुलो मतान्तर सहित गुरुङ निर्वाचित, कति थियो मतान्तर ?
२३ मंसिर, दोलखा । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मतगणना चलिरहदा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो मतान्तर सहित दोलखामा एमाले नेता पार्वत गुरुङ प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका छन् । शनिवार विहान सम्पन्न मतगणना अनुसार दोलखा जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा एमालेका पार्वत गुरुङ ३० हजार भन्दा बढी मतान्तरमा
काठमाडौं ३ ‘क’ बाट कांग्रेसका छिरिङ दोर्जे विजयी
काठमाडौं २३ मंसिर । काठमाडौं क्षेत्र नं ३ प्रदेश सभा क बाट नेपाली कांग्रेसका युवा नेता छिरिङ दोर्जे लामा विजयी भएका छन् । लामा आफ्ना प्रतिद्धन्द्धी भन्दा ११५२ मत अन्तरले विजयी भएका हुन् । लामा ६ हजार ४४८ मत ल्याएर विजयी भए । उनका निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी वाम गठबन्धनका रुद्रबहादुर बराइलीले ५ हजार
६ नं प्रदेशका भावी मुख्य मन्त्री कांग्रेस उम्मेदवार शाही विजयी
हुम्ला २२, मंसिर । प्रदेश नं ६ को मुख्य मन्त्रीका रुपमा हेरिएका कांग्रेस उम्मेदवार जीवन शाही हुम्लाको प्रदेश नं ख बाट विजयी भएका छन् । उनले ४,५१९ मत प्राप्त गरेका छन् । उनका निकटम प्रतिद्धन्द्धी माओवादी उम्मेदवार विजयी भण्डारीले ३९९३ मत प्राप्त गरेका छन् । शाही पूर्व मन्त्री भएपनि यो पल्ट मुख्य मन्त्रीका
काठमाडौको मतगणना सुरू
काठमाडौं २२, मंसिर । बिहीबार सम्पन्न प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको मतगणना कार्य काठमाडौँमा पनि सुरु भएको छ । काठमाडौंका निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १, ५, ६ र ९ को मतगणना सुरु भएको छ । बाँकी क्षेत्रको पनि मतगणनाको तयारी भइरहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत रमेशराज पोखरेलले जानकारी दिए । काठमाडौं १ मा कांग्रेसका
काठमाण्डौको निर्वाचन क्षेत्रहरुको मतगणना सुरु भएको छ ।
बिहिबार सम्पन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको मतगणना कार्य काठमाडौँमा सुरु भएको छ । काठमाडौंका निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १, ५, ६ र ९ को मतगणना सुरु भएको छ । बाँकी क्षेत्रको पनि मतगणनाको तयारी भइरहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत रमेशराज पोखरेलले जानकारी दिए । काठमाडौं १ मा कांग्रेसका प्रकाशमान सिंह, वाम गठबन्धनबाट
बस्नेतलाई ३ हजार ३ सय भन्दा बढी मतले पछि पार्दै अग्नि को अग्रता कायम ,पशुपति र शेरबहादुरको कडा टक्कर
सिन्धुपाल्चोकमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रारम्भिक मत परिणाम रोचक बन्दै गएको छ ।क्षेत्रनम्बर १ मा माओवादी केन्द्रका अग्नि सापकोटाले कांग्रेसका मोहनबहादुर बस्नेतसँग मतअन्तर फराकिलो बनाउँदै लगेका छन् । शुक्रबार बिहान ६ बजेसम्मको परिणामअनुसार पूर्वसञ्चारमन्त्री समेत रहेका सापकोटाले वर्तमान
जाजरकोटमा शक्तिको अग्रता कायमै
काठमाडौं २२, मंसिर । जाजरकोटमा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा वाम गठवन्धनका उम्मेदवार एवम् पूर्व गृहमन्त्री शक्ति बस्नेत प्रतिशपर्धी राजीव विक्रम शाही भन्दा २ हजार मत अन्तरले अगाडि छन् । पछिल्लो विवरण अनुसार बस्नेतले ७ हजार ८७ मत प्राप्त गरेका छन् भने शाहले ५ हजार ४ सय ७३ मत ल्याएका छन् ।